Study in Ukraine - nidaamka waxbarashada ee Ukraine. habka Waxbarashada
The nidaamka Yukreeniyaan waxbarashada waxay bixisaa tayo wanaagsan leh oo si fiican u horumarsan. Mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee maamulka dhexe iyo kuwa maxalliga ah waa in la siiyo fursadaha loo siman yahay ee helitaanka waxbarasho tayo sare waayo, dhammaan muwaadiniinta Ukraine.
Waxaa jira 15000 hay'adaha diyaarinta dugsiga gogoldhigga. Sida ay dugsiga sare Dastuurka qaadataa qayb dhexe ee nidaamka iyo waa lacag la'aan waana arrin la heli karo. 7 malaayiin ardayda ka qayb 21900 dugsiyada. qaybta gaarka ah ee waxbarashada sare waa qiimo lahayn. Dhulku, waxaa jira 200 dugsiyada gaarka ah (1% ee qadarka ardayda oo dhan).
Guurka ee dugsiga sare ka 10 (11) si ay u 12 nidaamka heerka, sida laga soo xigtay heerarka Yurub, waxaa loo qaadan meel hadda. Waxaa intaa dheer, ma jiro wax farqi ah ee content ee Ukraine (post-Soviet) waxbarashada dugsiga sare ka heerarka dugsiyada sare ee dalalka kale ee Yurub.
Waxaad qaadan kartaa waxbarasho xirfadeed ee 950 hay'adaha farsamada on salka waxbarashada dugsiga hoose iyo waxbarashada dugsiga sare. In nidaamka Yukreeniyaan of Education College of Education dheeraad ah waxaa loola jeedaa in qaybta hoose ee tacliinta sare.
In ka badan 1 million, hay'adaha ardayga tacliinta sare ee Ukraine u sameeyaan nidaam oo uu arko in ay noqon mid ka mid ah ee dunida ugu weyn. In Ukraine waxaad ka heli kartaa waxbarashada sare ee jaamacadaha (Dugsiyada tacliinta sare, machadyada) aqoonsan on heerka 3-4th. Ka dib markii ay 4 sano oo waxbarasho waxaad ka heli kartaa shahaadada Bachelor, 5 sano waa ku takhasusay, shan iyo badh ama 6 sano Masters Degree. oo dhan degrees qayaxan ka mid ah takhasuska waa kuwa ugu caansan.
Dabcan waxbarashada sare waxaa ka mid ah meeleyn shaqo, marka ardayda fursad ay ku helaan waayo-aragnimo. Aqoonsiga isreebreebka helay waa mudnaanta ee gobolka. In case of guul qalinjabinta ardayda jaamacadda u hesho. Diploma aan loo eegayn waxa foomka hantida waxa loola jeedaa. qoraalka ee liiska ku xiran la marks waxaa ku lifaaqan Dibloomada. Inkasta oo gobolka damaanad waafaqsan in ay heerka isreebreebka, shaqeeyaha tixgelinayaa sida awood jaamacadda is.Today, waxaad ka heli kartaa waxbarashada ee 290 jaamacadaha, Dugsiyada tacliinta sare iyo machadyada of Ukraine ee heerka 3-4th ee aqoonsiga. iyaga waxaa ka mid ah 220 hay'adaha dawladda, 70- gobolka non.
ardayda International helaan waxbarashada sare ee jaamacadaha, Dugsiyada tacliinta sare iyo machadyada in aan la aqoonsan oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin a liisan gaar ah si loo baro ardayda ajinebiga ah. Dhammaan jaamacadaha ka liiska Center Admission Ukraine hantiyi liisanka. Wasaaradda Waxbarashada iyo Science of Ukraine koontaroolka tayada adeegyada waxbarashada samaysay ardayda ajinebiga.
ardayda International bilaabaan waxbarasho la sannadkii aasaas.
Waxaa ka mid ah koorso of Ukraine (Ruush) luqadda iyo qaar ka mid ah maadooyinka dhamaystiran sida ay xirfadda mustaqbalka. waxbarasho dheeraad ah waxaa wada sii ardayda Ukraine. ( dhexdhexaad Ingiriisi sidoo kale waa la heli karaa si kastaba ha ahaatee)